Xildhibaannada Cabdi Weli taageersan oo aqbalay mooshinka in la geeyo BFS
Jornalizem ayaa heshay xog ku aadan in xildhibaanadii taageersanaa ra’iisul wasaare Cabdi walli Sheikh Axmed Maxamed ay ogolaadeen in maalinta berito ah uu buuq la’aan ku qabsoomo fadhiga xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegay in xildhibaanada la safan ra’iisul wasaaraha ay aqbaleen mooshinka inkastoo aan la cadeyn karin, waxaana ay aqbaleen in buuq la’aan uu dhaco kulanka berito ah.
Arrintan ayaa la sheegayaa in ay ugu wacan tahay kadib markii ay ogaadeen in ra’iisul wasaaraha uu wada-hadal qarsoodi ah kula jiro madaxweynaha kaasi oo ku saabsan is-casilaad.
Sidoo kale Jornalizem oo ay la hadleen qaar kamid ah xildhibaadii mooshinka ka horjeeday ayaa waxay u sheegeen in maalinta Axada ee Berri xildhibaanada kaliya loo qeybinayo mooshinka ka dhanka ah xukuumada Soomaaliya.
Shariif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed oo dhawaan kusoo laabtay magaalada Muqdisho ayaa arintaan ku yeeshay galaangal badan, isagoo kulamo kala duwan la qaatay xildhibaanada kala taageersan ra’iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
Dhanka kale wararka aan helayno ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha uu ka dalbaday xildhibaanada taageersan inay aqbalaan codka kalsoonida, taasi oo la yaab ku noqotay.
XOG: Warqad digniina oo la gaarsiiyey Xasan Sh loona qabtay laba toddobaad
Xog hoose oo aan ka helnay Xafiiska Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa sheegeysa in Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Somalia Ambassador Nicholas Kay uu Warqad ku saabsan Arrimaha Khilaafka gaarsiiyay Xafiiska Xassan Sheekh.
Xogta ayaa tibaaxeysa in warqadaasi ay kasoo baxday Madaxda iyo wakiilada dalalka beesha caalamka, taasi oo lagu soo qoray Digniino ku wajahnaa Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha dalka.
Warqada oo la sheegay inay ka koobneyd ilaa Laba bog, ayaa waxaa Xasan iyo C/weli looga digay in Khilaafkooda uu dalka Somalia dib ugu celsho dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale, warqada ayaa waxaa la tilmaamayaa in Khilaafka Xasan iyo C/weli ay QM faragalin Siyaasadeed ku sameyn doonto waa haddii aan xal degdeg ah laga gaarin Khilaafka lidka ku ah Hiigsiga 2016-ka ee Somalia.
Dhanka kale, QM ayaa waxaa lagu wadaa inay ka jawaabi doonto Arrimaha la xiriira Khilaafka oo ay Labada Mas’uul isku fiirsanayaan, waxaana la soo warinayaa in muddo Laba asbuuc ah Xasan iyo C/weli la siiyay inay ku xaliyaan Khilaafkooda.
Lama Oga qaabka ay QM xalka uga gaari doonto Khilaafka baahay ee labada Mas’uul u dhexeeyo, iyadoona maalmaha soo socda la filaayo inuu dhaco heshiis dhexmara Xasan iyo C/weli ama ay dhacdo faragalin Siyaasadeed.
Sawirro: Ciidanka Burundi oo ka baxay Kismaayo iyo Ethiopia oo beddeleysa
Waxaa isbadal lagu sameeyay 80 kamid ah ciidamadii ka socday dalka Burundi ee ku sugnaa magaalada Kismaayo.Ciidamadan la badalay ayaa muda kabadan hal sano ku sugnaa magaalada Kismaayo waxaana qorshuhu yahay in kuwa kale lagu soo badalo.
Dhanka kale ciidamada Sierra Leone ee kusugan magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa in Bisha soo socota ay gabi ahaanba isaga baxaan dalka Somalia kadib markii ay suuragal noqon wayday in ciidamo cusub oo lagu badalo kuwa hada ku sugan Kismaayo laga keeno dalka Sierra Leone sababo la xiriira cudurka Ebola oo fara ba’an ku haya dalkaas.
Waxaa suuragal ah in ciidamada Sierra Leone ee Kismaayo ka baxay booskooda lagu buuxiyo ciidamo ka socda dalka Ethiopia.
Hoos ka daawo ciidankii Burundi oo garoonka Kismaayo ka dhoofaya
JAWAARI oo wada qorshe lagu farxo !!
Wararka laga helayo Xarunta Madaxtooyada Somalia, ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ku howlan yahay isu soo dhaweynta Madaxweyne Xasan iyo Ra’isul wasaare C/weli.
Wararku waxa ay sheegayaan in Jawaari uu kulamo dhowr ah la kala qaatay Labadaasi Mas’uul, islamarkaana uu sharaxaad dheer ka siiyay qaabka ugu haboon ee lagu xalin karo Khilaafka.
Jawaari ayaa waxa uu dadaal xoogan xiligaani ku bixinayaa xalinta Khilaafka, isagoona xooga saarayo sidii ay kulan Isfahan ah ku wada qaadan lahaayen Xasan iyo C/weli oo iminka isaga dhow sidii hore.
Dhanka kale, Madaxweyne Xasan iyo Ra’isulwasaare C/weli Sheekh Axmed, ayaa muujinaayo dabacsanaan ku aadan xal ka gaarista Khilaafkooda, waxaana la soo warinayaa inuu socdo fursado lagu kulansiinayo Labada Mas’uul, inkastoo aan weli la Ogeyn sida uu noqon doono xaalka.
Si kastaba ha ahaatee, R/W C/weli ayaa horay u shaaciyay inuu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Madaxweyne Xasan, halka Madaxweynuhuna uu arrinkaasi ka biyo diiday, walow ay hadda muuqaneyso ifafaalo muujineyso isu soo dhawaanshaha Labada Mas’uul oo uu u dhaxeeyay Khilaaf adag.
Wada-hadalladii DF iyo Somaliland oo la filayo inay dib u furmaan dhowaan!!
Wasiirka madaxtooyadda Maamulka Somaliland Xirsi cali xaaji xasan ayaa safar ugu ambabaxay dalka Turkiga halkaasi uu dhawaan ka furmi doono shirkii u dhaxeeyay DF Somalia iyo Maamulka Somaliland.
Shirkaani ayaa waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ka furmi doono Magaalada Istanbuul ee Cariga dalka Turkiga, iyadoona ay ka qeybgali doonaan min laba xubnood oo ka kala socda DF Somalia iyo Maamulka Somaliland.
Xubnaha ka socda DF ayaa waxaa la tilmaamayaa in maanta iyo wixii ka dambeeya ay u ambabaxaan Magaalada Ankara oo uu ka furmi doono shirka ay labada dhinac uga arinsanayaan Midnimada Qaranka Somalia.
Shirkaani ayaa dhowr jeer baaqday kadib markii uu saameyn ba’an ku yeeshay Khilaafka ka dhexeeya Madaxweynaha dalka Xassan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isulwasaare C/weli taasi oo sababtay inuu ku imaado dib u dhac xiligaani soo gaarsiiyay.
Dhanka kale, waxaa hadda Istanbuul ku sugan Wasiirka Arrimaha Dibadda Maamulka Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, iyadoona halkaasi uu weli ka socdo gogol xaar ay Safaarada Soomaalida Istanbuul ugu jirto soo dhaweynta Wufuuda DF Somalia uga qeybgali doono shirkaani looga wada xaajoonayo Midnimada dalka, waxaana la filayaa in gudaha Asbuucaani uu dib u furmo.
XOG CUSUB:- Magacyada saddex siyaasi oo u sharaxan xilka R/W Cabdi Weli kadib
– Xog aan ka helnay Madaxtooyada Somalia, ayaa sheegeysa in Madxaweyne Xassan Sheekh uu miiska u saaran yahiin liiska shaqsiyaadka u sharaxan Xilka Ra’isul wasaaranimo, haddii lagu guuleysto in C/Weli Sheekh Axmed la rido.
Xogta oo laga soo xigtay mas’uul ka tirsan Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegeysa in shaqsiyaadkaasi u taagan xilka ay ugu cad-cad yihiin seddex Mas’uul oo magacyadooda lagu kala sheegay:-
1 – Xuseen Cabdi Xalane, Wasiirka Maaliyada Dowladda Soomaaliya ee iminka, kana soo jeeda beesha Absame.
2 – Bashiir Nur Bidaar, oo horay usoo noqday musharax u taagnaa qabashada madaxtinimada dalka, kana soo jeeda beesha Mareexaan.
2 – C/llahi Ciil Mooge Xirsi, Wasiirkii hore ee Warfaafinta, boostada iyo is-gaarsiinta ee xukuumaddii Saacid, una dhashay beesha Absame.
Seddexdaani Mas’uul ee ugu cad-cad, ayaa waxa ay Siyaasad ahaan isku dhow yihiin Madxaweyne Xasan iyo kooxdiisa Damu-Jadiid.
Si kastaba, wararka qaar ayaa sheegaya in Xuseen Cabdi Xalane uu yahay ninka ugu dhow madaxweynaha. Sidoo kale waxa uu xiriir dhow la lee yahay dowladda Ethiopia oo qeyb ka ah ololaha lagu ridayo Cabdi Weli.
Dhanka kale, Xassan Sheekh oo uu xilka uga harsan yahay wax ka yar laba sano sano ayaa waxa uu ka fiirsanayaa shaqsiga uu xilkaasi u dhiiban doono, dhicitaanka R/W C/Weli Sheekh kadib, si khilaaf kale uusan u imaan.
IGAD oo soo jeedisay in 3 qodob oo 2 ay yihiin halis lagu xaliyo khilaafka DF
Wasiiradda arrimaha Dibadda urur Goboleedka IGAD oo shir gaar ah ku dhinac qabsaday xiligii shirkii NEW DEAL-ka ee lagu qabtay caasimada Copenhagen ee dalka Denmark ayaa 3 qodob usoo jeediyey madaxda Soomaalida inay ku xaliyaan khilaafkooda saddex qodob oo kala horeeya oo loo fulinayo sida ay u kala horeeyaan.
1 – In Madaxweyne Xasan Sheikh iyo Raysul wasaare Cabdiweli iyo kooxaha kala taageersan wada fadhiistaan oo heshiiyaan (RECONCILIATION BETWEEN PARTIES) haddii ay suuragal tahay oo ay dib u wada shaqeyn karayaan, haddii taasi suurageli waysana waxay ku taliyeen.
2 – In Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ka wada hadlaan (NEGOTIATED EXIT) oo ah sidii Raysul wasaaraha isku casili lahaa, qodobkaan oo ay sheegeen hadduu suuragal noqon waayo ay ku taliyeen.
3 – In Baarlamaanka lagu kala baxo (PARLIEMENT MOTION) oo mooshinka kalsoonida loogala noqonayo Xukuumadda Raysul wasaare Cabdiweli cod loo qaado, halkaasna lagu soo gabagabeeyo khilaafka xargaha goostay ee ka dhex aloosan madaxweynaha iyo Raysul wasaaraha.
Go’aanaddaan kasoo baxay urur goboleedka IGAD ayaa u muuqanaya go’aano dhexdhexaad ah oo ah taladii saxda aheyd ee ku haboneyd in lagu xaliyo khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo Raysulwasaaraha.
Xubno ka mid ah baarlamaanka oo taageersan Raysul wasaare Cabdiweli ayaa saxaafadu heshay qoraal ay u direen wasiirka Arrimahha Dibadda Itoobiya H.E Dr Tedros Adhanom oo ay kaga cabanayaan labo qodob oo kamid ah 3-da qodob oo kala horeeya oo IGAD Soo jeedisay in lagu dhameeyo qilaafka madaxda Soomaalida.
Qodobada xildhibaanada taageersan Raysul wasaaraha diidan yihiin ayaa kala ah in laga wada hadlo sidii R/W Cabdiweli isku casili lahaa haddii taasi suugal noqon waysana in Baarlamaanka iyo cod lagu kala baxo.
Xildhibaanada Taageersan Cabdiweli ayaa soo jeedinaya oo IGAD ka codsanaya in qilaafka lagu xaliyo wada hadal oo Madaxweynaha iyo Raysul wasaaraha la heshiisiiyo, arintaan heshiiska ah ayaa ka imaan karta kaliya labada masuul oo qilaafku u dhaxeeyo.
Wakiilka UNSOM Somalia iyo qaar kamid ah wadamada beesha caalamka oo horey usoo jeediyey in Madaxweynaha iyo Raysul wasaaraha heshiiyaan ayaa go’aankoodaas ka laabtay hadda iyaga oo soo jeedinaya in Baarlamaanka lagu kala baxo oo haddii Xukuumada Cabdiweli kalsoonida lagala laabto uu Madaxweyne Xasan Sheikh mudo aan ka badneyn 15 cisho kusoo magacaabo Raysul wasaare cusub, kadibna si degdeg ah loo dhiso xukuumad tayo leh oo shaqeysa ilaa sanadka 2016-ka.
Si kastaba ha ahaatee Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku hor kufay shacabka Soomaaliya kadib markii 3 jeer guddoonka baarlamaanka ku fashilmay socodsiinta mooshin si sharci ah guddoonku uga qabtay qaar kamid ah xubnaha Baarlamaanka iyo guud ahaan habsami u socodka hawlaha Baarlamaanka Dawladda Federaalka soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Prof. Xasan Sheikh ayaa hadda bilaabay inuu R/W Cabdiweli Sheilh iyo xubnaha Baarlamaanka ee taageersan kala hadlo sidii loo heli lahaa qodobka Labaad ee IGAD ku talisay ee ahaa in laga wada hado sidii R/W Cabdiweli isku casili lahaa (NEGOTIATED EXIT ).
Qodobkaan ah in R/W Cabdiweli is casilo ayaa la sheegayaa inta laga wada hadlayo inay suuragal tahay in kulamada Baarlamaanka dib loo dhigo ilamaa laga quusto in R/W Cabdiweli is casilo.
Madaxweyne Cabdi Qasim oo sheegay hal arrin oo sabab u ah khilaafka DFS
Iyadoo khilaaf uu u dhaxeeyo madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha dalka ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan ayaa u sababeeyay dastuurka dalka Soomaaliya.
Madaxweyne C/qaasim wuxuu sheegay in caqabadaha ugu badan ay ka yimaadaan awoodaha dastuurka ee ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha dalka ay yihiin kuwo isku qasan, sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
“Khilaafka haatan taagan marxalado badan ayuu soo maray laga soo bilaabo dowladii Carta, qaladka ugu weyn waa dastuurka dalka, waxaa haboon in dastuurka lagu kala saaraa awoodaha madaxda, tan xigtana waxa weeye shacabka Soomaaliyeed khilaaf wey ka daaleen, wax faa’ido ahna ma jirto”.
C/qaasim Salaad Xasan ayaa dhanka kale sheegay in khilaafka madaxda dalka uu sababayo caqabado ka hor imaan kara horumarka laga gaaro dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhanka amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya.
“Caqabad weyn bey horumarka dowlada ku tahay, amaankana ku tahay, sidoo kale waxay caqabad ku tahay taageeradii laga heli lahaa dowladaha caalamka, marka maba haboona ee waa inay ka gudbaan”.sidaasi ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
“waxaan ku talinayaa waxgaradka wax laga maqlayo iyo culumaa’udiinka inay la hadlaan madaxda is qilaafsan, si khilaafka loo dhameeyo sababtoo ah khilaafi dan kuma jirto”ayuu hadalkiisa kusii daray C/qaasim.
BEELO DIIDAY MAAMULKA G/DHEXE!
Waxaa sii badanaya dadka hor imaanayo qorshaha maamul u sameynta ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo qaban qaabadooda ay ka kala socoto degmooyinka Dhuusomareeb iyo Cadaado.
Beelaha daga waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay dhaliilsan yihiin qaabka loo wado qorshaha maamul u sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha deegaanka Dhabad ee waqooyiga gobolka Galgaduud Aadan C/nuur Galaal Ganeey, ayaa sheegay in iyadoo aan la sameyn dib u hishiisiin la sameyn aysan ka qeyb gali doonin maamul u sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
“Sababtaan ku diidanahay waxa weeye, wax walbaa waxaa ka horeeya dib u hishiisiin oo in beelaha ay is fahmaan ayna hishiiyaan dhexdooda, maamulka waxaa dhisan kara dadka deegaanka”sidaasi ayuu yiri Aadan Ganeey.
Aragtidan waxaa sidoo kale qaba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo kasoo jeeda waqooyiga gobolka Galgaduud, sida wararka ay sheegayaan.
Dowlada Soomaaliya, maamulka Ximan iyo Xeeb iyo masuuliyiinta maamulka Ahlu sunna ayaa wada qorshaha maamul u sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya.
WAR CULUS:- Taliyihii Baarlamaanka oo la badalay iyo mid M/weynaha ku dhaw oo la magacaabay
p>Warar aan si hoose u helnay ayaa waxa uu sheegayaa in xilka laga qaaday Taliyihii ciidanka Booliiska Illaalada Baarlamaanka isla markaana la magacaabay taliye cusub kaas oo ay isku dhaw yihiin M/weynaha.
Taliyaha xilka laga qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed “Aboor” kaas oo la sheegay in uu diiday in Baarlamaanka ay ciidamo ay galaan markii xildhibaanada ay fowdada wadeen sidaas darteed xilka looga qaaday.
Dhanka kale Mareexaan Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed “Aboor” ayaa la sheegay in uu ahaa nin ay qaraabo yihiin R/wasaaraha sidaas darteed uu ku diidanaa in Baarlamaanka ay gudaha u galaan.
Xilka cusub ee Taliyaha Baarlamaanka ayaa waxaa loo magacaabay Gaashaanle Qaasim Xasan Fiidoow oo ah shaqsi ay qaraabo yihiin M/weynaha isla markaana aan diidi doonin in ciidamo ay gudaha u galaan Baarlamaanka ay fowdo bilaabato.
Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in Digreeto uu ku saxiixan yahay M/weynaha ay soo baxdo isla markaana uu xilka kula wareego Gaashaanle Qaasim Xasan Fiidoow oo xilkaan loo magacaabay.
SHAACIN: Maxaad ka taqaan afarta nin ee daaha gadaashiisa ka haga C/Weli? (Sawiro)
khilaafka dhex yaalla madaxda dalka ee u gudbay Barlamaanka ayaa la ogaaday ragga soo maleegay bilowgiisa iyada oo qaabab kala duwan ula taliya RW C/wali Sheekh Axmed si qaska iyo jahwareerka u daba dheeraado.
Ayada oo aan horey usoo qornay ragga khilaafka ka hurinaya dhinaca madaxweynaha oo ay ka mid yihiin Faarax C/Qaadir iyo Cabdi Kariim Xuseen Guuleed, ayaa waxaan markan eegeynaa dhinaca ra’iisul wasaaraha.
Xubnaha oo qaarkood waa rag hore ula soo shaqeeyay Madaxwayne Xasan Sheekh xilligi uu doorashada galayay. Hadaba wax ka baro raggan saamaynta kuleh siyaasadda uu ku dagaal galayo R/W C/Wali.
1. Cabdirisaaq Juriile: Wuxuu hore Bare uga soo noqday Jaamacaddii umadda, xilligii kali-taliska. Waxaa lagu eedeeyaa inuu ku lug lahaa musuq maasuq iyo dhaqaalo lunsi. Wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii kumeel gaarka ahaa. Sidoo kale wuxuu u tartamay jagada Gudoomiyaha Barlamaanka oo uu markii danbe ka tanaasulay. Hadda waa Gudoomiyaha Guddi hoosaadka axsaabta. Juriile wuxuu ciyaarayaa siyaasad waalan oo uu ku doonaayo inuu kusoo laabto saaxada siyaasadda.
2 – Ridwaan Xirsi Maxamed: Ninkani waxa uu qayb wayn ku lee yahay khilaafka labada masuul dhex yaalla. Waa Ra’iisal Wasaare ku xigeen ahna wasiirka awqaafta. Ridwaan wax hawl ah kama qaban wasaaraddii Awqaafta marka laga reebo kutubo iyo buugaag mucaawina ah oo uu mararka qaar qaybiyo. Waxa uu hore uga mid ahaa shaqaalaha Safaaradda Soomaaliya ee Yaman. Waxaa lagu eedeeyaa inuu iibsan jiray deeqaha Waxbarasho ee Soomaaliya la siiyo. Ridwaan wuxuu dagaal hoose ugu jiraa sidii Abuukaate Caydiid Ilka Xanaf loogu hayn lahaa jagada gudoomiyaha maxkamadda sare oo waayadan danbe u ekaa mid gabalkiisa sii dhacaayo, taas oo caqabad ku ah isbadalka la doonayay in lagu hagaajiyo musuqmaasuqa baahay ee hay’adaha garsoorka ka jira. Ridwaan wuxuu buuxiyay booskii Fowziyo Yuusuf Xaaji oo ay isku hayb yihiin. Sababaha ugu wayn dagaalkiisa waa inuusan soo laabanayn hadii xukuumadda hadda jirta la kala diro. Wuxuu u xusul duubayaa inuu dantiisa siyaasadeed ilaashado.
3 – Dr. Maxamed Nuur Gacal: Ninkani wuxuu ka qayb qaatay dhismihii Xisbiga PDP ee Xasan Sheekh musharaxa u ahaa. Dadaal wayn wuxuu u galay ridistii xukuumadii Saacid oo uu Wasiiru Dawle ka ahaa. Waxaa lagu tiriyaa dadkii sababta u ahaa in R/W C/Wali xilkan loo dhiibo. Waxaa la sheegaa inuu kasoo ka xeeyay Sucuudiga, kana gaday Madaxwaynaha in C/Wali yahay nin u qalma booskan, laakiin wuxuu ka carooday markii madaxwaynaha uu booskiisa ku badalay Mustaf Sheekh Cali Dhuculoow oo ku hayb ah. Dr Gacal waa la taliyaha R/W C/Wali. Ninkan oo si hoose u yaqaana kooxdii uu hore uga tirsanaa ayaa samaynaya ciyaar siyaasadeed oo uu doonaayo inuu kala tuuro hamiga iyo higsiga dawladda Xasan Sheekh.
4 – Prof. Maxamed Cabdi Gaandi: Ninkani waa nin aqoonyahan ah, horena wasiirka difaaca uga soo noqday xukuumadii Cumar C/rashiid. Wuxuu aasaasay Azania oo qorshaheeda fashil ku dhamaaday. Sidoo kale waa nin xiriir la leh dawlado shisheeye sida Faransiiska, Norway iyo Kenya. Gaandi wuxuu dagaal mudo dheer socday kula jiray Dawladda Xasan Sheekh isaga oo geed dheer iyo mid gaaban u fuulay in xukuumadda hada jirta ay carqaladayso hiigsiga 2016.
Si kastaba ha ahaatee qorshahan afartan nin ayaa banjarsan ilaa iyo hadda, iyada oo xaalka kooxdan daaha gadaashiisa ka hagta RW C/wali uu kusoo aruuray abaabulida qas iyo fawdo ka dhacda gudaha Barlamaanka taasoo mudo kooban dhiig joojin u noqon karta Ra’iisul Wasaaraha, balse sida habeen hore ka muuqatay hadalkiisa u eg in waqtigii RW C/wali uu joogi lahaa xafiiska uu dhamaaday.
Kooxdan afarta ah ayaa si toos ah ugu xadgudbaya habsami u socodka fadhiga Barlamaanka si uu gutto shaqooyinkiisa Dastuuriga ah taas oo ka dhigan inay jabiyeen xeerarka u yaalla Barlamaanka. Bal aan ka war sugno halka dhalanteedka raggan ay wadaan uu ku dhamaado.
Guddoomiye Jawaari ma dheelay mise dheeshuu ku ciyaaray (Xog & Gorfeyn)
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa sii huriyay khilaafkii u dhaxeeyay Madaxweynaha Dowladda iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada, markii uu Bayaan ku sheegay inuu hakiyay mooshinkii laga keenay Xukuumada.
Xilli Guddoonka Sare ee Baarlamaanka uu qirsan yahay in Isniintii mooshinka loo qaybiyay Xildhibaanada Baarlamaanka, ayuu dhanka kale uu Jawaari sheegay inaan mooshinka horey loo sii amba qaadi karin, ilaama xal looga helaayo Xildhibaanada buuqa iyo sawaxanka sameyneysa.
Tani, ayaa waxay liddi ku tahay waxyaabihii ku qornaa nuqulada mooshinkii loo qaybiyay Xildhibaanada. Mooshinka waxaa ku qoran in 24-ka bisha November la qaybiyay waraaqihii mooshinka, ayna Xildhibaanadu ka doodi doonaan 30-ka bishaan. Waxaana shaki xoog leh laga muujinayaa sida leesku waafajin doono waxa ku qoran mooshinka iyo Bayaankii uu Jawaari ka soo saaray, buuqa iyo sawaxanka ruxay Xarunta Golaha Shacabka.
Sharci yaqaanada, ayaa kuu sheegaaya in Gudoomiyaha Baarlamaanku uu lee yahay awoodo gaar ah, oo uu wax kaga qaban karo Xildhibaanada arbushaada ku sameyneysa qabsoomida kalfadhiyadii Baarlamaanka.
Xildhibaan C/raxmaan Axmed Suge oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Somaliya, ayaa waxa uu isna iftiimiyay in Gudoomiye Jawaari uu lee yahay awoodo uu xabsiga ku dhigi karaayo, Xildhibaanada ka biyo diidan in kulamada Baarlamaanka, ay si caadi ah u qabsoomaan.
Xildhibaan Suge waxa uu Jawaari ku eedeeyay inaanay daacad ka ahayn, in si caadi ah ay u qabsoomaan kalfadhiyada Baarlamaanka, xilli natiijo isku mid ah ay ku soo dhammaadeen, labadii kulan ee ka horeeyay fadhigii Isniinta.
Maxay tahay xagal daacinta Jawaari?
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa waxaa la rumeysan yahay in uu gacan bidixeynaayo inuu tallaabo ka qaado Xildhibaanada is hortaaga ku sameyneysa kulamada Xildhibaanada Baarlamaanka. Sababo ku aadan Jawaari oo si weyn kaga biyo diidan doorashadii 17-kii bishaan uu ku soo baxay Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed (Saddexda Gobol) Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Khilaafka Jawaari iyo Shariif Xasan, ayaa soo bilowday bartamihii sanadkii 2012-ka, xilligaa oo Jawaari uu u tartamaayay Gudoomiyaha Baarlamaanka, halka Shariif Xasan uu isna xusul-duub ugu jiray inuu noqdo Madaxweynaha Wadanka. Jawaari waxa uu xilligaa cunaqabateeyay Shariif Xasan, oo ka baxay tartankii doorashada Madaxtinimada, maadaama ay isu deegaan ka soo jeedaan, isla-markaana uu halbeega 4.5 xadidaayo, nidaamka awood qaybsiga ee beelaha.
Jawaari, ayaa ku mowqif noqday Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada C/weli Sheekh Axmed, marka ay noqoto tallaabada uu ku soo baxay Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo ay horey u wada saluugeen, xilli Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhaweeyay.
Labadaan xubnood, ayaa jegada uu ku soo baxay Shariif Xasan waxa ay la doonayeen xubno kale oo deegaan ahaan ka soo jeeda Gobolada Shabeellaha Hoose, Baay iyo Bakool, walow aynaan taasi u suuroobin.
Jawaari oo diiday in Caalamka uu soo fara-geliyo khilaafka Madaxda Dowladda!
Tallaabada uu Jawaari ku diiday in Caalamka uu soo fara-geliyo khilaafka siyaasadeed ee Magaalada Muqdisho ka taagan, ayaa waxaa lagu sheegay inuu ka carooday tallaabadii uu Madaxweynuhu ku taageeray doorashadii Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Jawaari, ayaa waxa uu ku adkeystay in xalinta khilaafka Madaxda Dowladda loo daayo Baarlamaanka Somaliya, maadaama Baarlamaanka loo askumay fududaynta amuuraha murugsan ee markaasi taagan iyo in dalka uu ku haggo tubta toosan.
Afhayeenka Baarlamaanka, ayaa waxay dadka qaarkii ku eedeynayaan inaanay daacad ka ahayn soo afjarida khilaafka taagan, isagoona u arka mid uu kaga aargudan karo Madaxweynaha, oo taageeray doorashadii Baydhabo.
Xasan Xuseen Yaxye oo ka mid ah aqoonyahanada Somaliyeed ee qurbaha ka soo laabatay, kuna nool Magaalada Muqdisho, ayaa qaba in Jawaari uu kala fur furi karo xaalada cakiran ee ka taagan Xarunta Baarlamaanka Somaliya.
Doorashooyinka dimuqraaddiga ah ee Somalia oo ‘halis ku jira’ kadib markii…
Falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa sheegaya in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxweynaha iyo ra’iisul-wasaaraha uu Soomaaliya uu dariiqa ka weecin karo in ay Somaaliya qabsato doorashadii ugu horreeysay ee si dimuqraaddi ah u dhacda tan iyo 1967-kii.
khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda dawladda Soomaaliya kama saari doono mushiladda tagan ee waxa uu marin habaabin doonaa mustaqbalkeeda, ayuu sheegay Cabdikariim Daa’uud oo ah macalin culuumka siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Muqdisho.
“Mar alla marka aad maqasho in khilaaf uu ka dhex jiro madaxda sare, waxaa durbadiiba muuqanaysa ifafaalo aan wanaagsaneyn oo ku aaddan mustaqbalka Soomaaliya,” ayuu yiri, isaga oo intaa raaciyay in ay loo baahan yahay in khilaafka lagu dhameeyo “is afgarad iyo wadatashi”.
Isaga oo faallo ka bixinayay kaalinta uu barlamaanku ku leeyahay xallinta khilaafka, ayuu Daa’uud ku dhalleeceeyay xildhibaannada in ay uga sii dareen xaaladda oo aynana qaadeeyn tallaabooyinka munaasibka u ah in si dhex-dhexaadnimo ah loo eego qaddiyadaha iyada oo aan dhinac lala safan.
“Waxay ku eedeeyeen ra’iisul-wasaaraha in uu ku guul-darreeystay gudashada xilkiisa, laakiin cidina su’aalo ma waydiin ra’iisul-wasaaraha lamana siin fursad uu isku difaaco,” ayuu yiri.
Khilaafkii kadib waxaa markiiba ra’iisul-wasaaraha lagu bilaabay olole xil ka qaadis ah, ayuu raaciyay, taas oo muujnaysa suuragalnimada dano shakhsiyeed oo ka jira dhinaca xildhibaannada.
“Xildhibaannada kale ee iyagana ka soo horjeeda cayrinta ra’iisul-wasaaraha waxay sameeyeen isla qorshahaas,” ayuu yiri. “Haddii ayan difaaci karin, waxay sameeynayaan wax walba oo kale oo ay ku gaari karaan ujeedkooda, waxana ka mida fawdada.”
Xildhibaannadu waxa laga yaabaa in ay jideeyaan caqabad cusub oo ku soo kororta siyaasadda Soomaaliya, oo qoladdii wax diidanba inta ay sharciga meel iska dhigaan ay adeegsadaan buuq iyo qeylo si ay qolada ka awood badan uga adkaadaan, ayuu sheegay Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal, oo ah Guddoomiyaha Dalladda Waxbarashada Ahliga (SAFE).
“Waxa ay aheyd in hoggaanka baarlamaanka in uu xeeriyo aragtiyaha [kala duwan] inta aan mooshinka la keenin, haddii la keenayna waxa ay ahayd in xeerarka iyo awoodaha uu sharcigu siinayo uu adeegsado,” ayuu yiri.
“Baarlanmaka waan hay’adda ugu muiimsan dawladnimada oo wax kala baddali kara waxna kala saari kara,” ayuu yiri. “Laakiin, waxaan is leelayahy waqti ayay qaadanaysaa in adakaysiga aan barano iyo in aan u hoggaansano xeerarka noo qoran marka la tixraaco wixii naan soo marnay.”
SIR LA HELAY:- Shariif Xasan oo qorshe adag damacsan (WAA MAXAY)
Dhawaan maamulka Koonfur Galbeed ee Sedaxda gobal waxaa loo doortay Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo Soomaalida qaar u bixiyeen magaca ah SHARIIF SAKIIN, ka dib is ged gediska dhanka siyaasadda ah.
Shabakada Jornalizem ayaa sanad kahor baahisay in Shariif Xasan uu noqonayo Madaxweynaha Koonfur Galbeed, sidoo kalena Cabdiweli Gaas isna noqon doono Madaxweynahaha Puntland.
Hadaba Shariif Xasan waa uu ku guuleystay hamigiisa mudada badan uu lahaa, waxaana xilligaan uu doonayaa in uu wejiyo cusub lasoo baxo.
Qorshaha ugu horeeya ayaa ah in meesha uu ka saaro hogaamiyaha maamulka Lixda Gobal, durba waxa uu bilaabay siyaasadiisa cusleed, isaga oo ku guuleestay gudoomiyahii Baarlamaanka maamulka Lixda Gobal in uu dhankiisa noqdo.
Shariif Xasan ayaa doonaya markii uu hanto dhamaan siyaasiinta maamulka Lixda gobal in uu ku dadaalo dhameystirka maamulkiisa, isaga oo qorshe adag leh.
Dowladda Federaalka ayuu hadhoow ku noqon doonaa caqabad aad u daran, waxaana uu doonayaa in uu bilaabo gor gortan xoogan.
Xog: Arrin Xasan uu shalay sammeeyey oo sababtay in Jawaari hakiyo mooshinka
Go’aankii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Muqdisho ugu casuumay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa si aad ah uga carreysiiyey guddoomiye Jawaari, sida ay ilo-wareedyo xog-ogaal ah u sheegeen Jornalizem.
Shariif Xasan iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa shalay si diiran loogu soo dhoweeyey Muqdisho, waxaana la filayaa inuu kullamo la yeesho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Wararka ayaa sheegaya in ka hor inta uusan Shariif Xasan iman Muqdisho, uu Jawaari kala hadlay madaxweynaha inuu ka joogsado go’aankaasi, balse madaxweynaha uu ku adkeysatay. Waxaa la filayaa in Shariif Xasan iyo madaxweynaha ay kala hadlaan dhameystirka maamulka saddexda gobol, oo uu Jawaari aad u diidan yahay.
Jawaari oo saacado ka hor inta uusan Shariif Xasan imaan Muqdisho ku dhowaaqay in mooshinka ka dhanka ah Cabdi Weli loo qeybiyey xildhibaanada, codna loo qaadi doono shan maalmood kadib, ayaa go’aankaas ka laabtay isaga oo shaaciyey inaan mooshinka la horkeenin doonin baarlamanka.
Xildhibaanno arrinta xog-ogaal u ah ayaa Alldhacdo u sheegay in Jawaari uu ka carrooday tallaabada madaxweyne Xasan Sheekh, taasina ay keentay in saacado gudahood uu ku beddelo go’aankiisa.
Khilaafka ka dhex taagan madaxda dowladda Soomaaliya ayaa u muuqda mid ku saleysan dano gaar ah oo dhinac kasta uu eegnayo, waxaana hadda muuqata in Xasan Sheekh ay fashil u keentay la safashadiia Shariif Xasan.
DEG DEG:- Madaxweyne Xasan Sheekh oo ogolaaday hal arin oo muddo badan uu diidanaa
Warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo Xubno ku dhaw dhaw Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud , ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu ogolaaday in Wadahadal lagu dhameeyo Khilaafka u dhaxeeya isaga iyo R/Wasaaraha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guul dareestay qaabab badan uu qorsheenayay in uu kaga adkaan karo meeshana uga saari karo R/Wasaaraha Soomaaliya, waxaana fashilkii ugu dambeeyay uu kasoo wajahay Kulamada Baarlamaanka kadib markii ay xildhibaano Is hortaageen Mooshinkii lagu ridi lahaa R/Wasaaraha.
Sida Wararka ku heleyno Madaxweynaha iyo Xubnaha ku dhaw dhaw ayaa isla garawsaday in ay la galaan Raizul Wasaaraha wadahadal maadaama lagu fashilmay qaababkii la doonayay in meesha looga saaro Ra’izul Wasaare Cabdi Wali.
Xubno katirsan Dowlada iyo Beesha Caalamka ayaa la filayaa in durba maanta bilaabaan sidii ay kala dhax gali lahaayeen Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha oo markii hore adkaatay in arintooda lagu dhameeyo wadahadal.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa si weyn uga soo horjeeday in uu wadahadal la furo R/Wasaaraha Soomaaliya waxa uuna ku adkeesanayay Xasan Sheekh in xalka arintooda loo daayo Baarlamaanka ayna ku kala bixi doonaan Codka Baarlamaanka isaga iyo R/Wasaaraha.
R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in wadahadl lagu dhameeyo Khilaafka Siyaasadeed ee u dhaxeeya isaga iyo Madaxweynaha , waxa uuna marar badan ku baaqay in Khilaafka si hoose lagu dhameeyo balse aan Baarlamaanka loo gudbin.
Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha ayaa gaaray halkii ugu xumeed, waxaana adkaatay in xal laga gaaro Khilaafkan iyadoona Baarlamaanka Soomaaliya oo laga sugayay xal ka gaarida arintan ay ku guul dareesteen in ay Xaliyaan Khilaafka labada Masuul in ay uga sii daraan mooyee.
Odayaashii soo Xulay Baarlamaanka Soomaaliya oo isku dayaya in ay Xaliyaan Xiisada Siyaasadeed ee dalka ka jirta
Qaar kamid ah Odayaashii Dhaqanka Beelaha Soomaaliyeed ee soo xulay Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xiligan isku hoolaya in ay kala dhax galaan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/Wasaare Cabdi Wali Sheekh Axmed oo Khilaaf Xoogan soo kala dhax galay.
Odayaasha ayaa isku arka in ay door ka qaadan karaan Xalinta Khilaafka xoogeestay ee u dhaxeeya Madaxda sare ee Dalka, Khilaafkan ayaana saameyn badan ku yeeshay Kulamada Baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqooyinkii kasocday Xafiisyada Dowlada.
Xubno katirsan Odayaashan oo la kulmay Wakiilo kasocda Beesha Caalamka ayaa laga codsaday in ay doorkooda muujiyaan ayna isku dayaan in ay gacan ka geestaan xalinta Khilaafka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.
Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed xubno matalaya ayaa qorsheenaya in ay la kulmaan Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha Soomaaliya kalana hadlaan sida ugu haboon ee xal lagu gaari karo loogana gudbi karo Khilaafka ragaadiyay Hormarka Dowlada.
Baarlanaanka Soomaaliya oo la filayay in ay xal kama dambeys ah ka gaaraan Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynah iyo R/Wasaaraha ayaa ku guul dareestay in ay xal gaaraan kadib markii fadhiyadooda ay kusoo dhamaadeen Fashil.
Diyaaradaha Kenya oo shacab ku laayay deegaano ka mid ah Jubooyinka iyo Gedo (FAAH FAAHIN)
Diyaaradaha dagaalka ee Kenya, ayaa waxay maalintii saddexaad ay duqeymo ka geysteen Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, iyagoo markaasi beegsanaaya waxa ay ugu yeereen argagaxisada.
Diyaaradaha Kenya, ayaa khasaaraha ugu badan waxa ay u geysteen dad rayid ah iyo xoolo fara badan, iyadoo duqeymaha xoogooduna ka geystay inta u dhaxeyso Degmooyinka Beled Xaawo iyo Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Diyaaradaha waxay gantaalo culus ay la dhaceen deegaanada Gadoon-dhawe, Khadiija Xaaji, Nus Dariiq, Yaaqle, Jal-deyso iyo Qabri Sheekh, waxayna dhammaan deegaanadaasi ku yaallaan inta u dhaxeyso Ceelwaaq iyo Beled Xaawo.
Sidoo kale duqeymaha, ayaa waxay saameeyeen deegaanada Ceel-cad, Galeen-shinbi, Beexaani, Hadaaqaan, Kaam-jiroon, Har-boole iyo deegaano kaloo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose.
Waxaa kaloo jira warar sheegaaya in deegaano ka fog fog Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, ay saameeyeen duqeymaha diyaaradaha Kenya ka wadaan Gobolada Koonfureed ee Somaliya.
Gudoomiyaha Degmada Beled Xaawo Yuusuf Maxamed C/qaadir (Yuusuf Kaanti), ayaa wuxuu si xoogan uu u cambaareeyay duqeymaha ay waxyeelada ka soo gaareyso dadka xoolo dhaqatada ah. Wuxuuna Kenya weydiistay inay ka fiirsato waxyeelada ay dadka rayidka ah u geysaneyso.
Gudoomiyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa sheegay inaan Kenya looga baahnayn inay waxyeelo u geysato dadka maatida ah, laakiin ay beegsan karto Xarumaha Shabaabku ku lee yihiin Gobolka.
Korneyl Aadan Axmed Xersi (Aadan Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka, ayaa waxa uu Dowladda Kenya weydiistay inay Saraakiisha Dowladda iskaashi kala yeelato, goobaha ay duqeymaha ka geysaneyso, si loo badbaadiyo dadka rayidka ah.
Korneyl Rufle oo u waramay Alldhacdo.com, ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan ay hal cadow lee yihiin, kaasoo ah Ururka Al Shabaab, isla-markaana ay iskaashi ka yeelan karayaan, sidii dhibaato lagu gaarsiin lahaa Ururkaasi.
VOA, ayaa waxay caawa baahisay in ugu yaraan shan ruux oo Shabaabka ka tirsan lagu dilay, duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya laga lee yahay.
Korneyl Rufle, ayaa sheegaaya in duqeymaha ay ku dhinteen saddex ruux oo shacab ah iyo in ka badan laba boqol oo xoolaha nool ah, isuguna jira geela iyo ariba.
Kenya, ayaa waxay ka carootay 28-kii qof ee Sabtidii lagu dilay deegaanka Cumar Jilicow, oo 15km u jirta Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Dadkaasi 17 ka mid ah waxay ahaayeen macalimiinta wax ka dhigta iskuulada Kenya.
Taageerada C/Weli Gaas ee R/W Cabdi Weli, ma dhabbaa, mise qar ka tuuris?
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland ayaa war saxaafadeed uu soo saaray 21.11.14 ku taageeray Raisul-wasaaraha soomaaliya C/weli Sh. Axmed. Kuna tilmaamay Baarlamaanka Soomaaliya kuwa laaluush qaatayal, asigoo ka digay in lacag lagu bur buriyo hey’adaha dowlada. Hadalkaasi oo la mid ah hadalkii ka soo yeeray xafiiska UN-ka Muqdisho uu la taliye ka yahay Nuuradiin Diiriye oo ah safiir u fadhiya Puntland muqdisho balse huwan shaar UN.
C/weli gaas wuxuu ilooway in baarlamaan laaluush la siiyo ay ku taqasusen Puntland dib u raac taariikhda 1967. Bal xusuuso doorashadii Madaxweyne Aadan Cabdulle iyo C/rashiid Cali Sharmaake dhex martay 1967, muxuu ku soo baxay Madaxweyne Sharmaake? Aadan Cade waxaa loogu guuleystay cod laalush lagu bixiyey wax qarsoona maaha oo taariikhdey ku cadahay. Waxaa is weydiin mudan taageerada ay Puntland u fidisay Raisul-wasaare C/weli Sh. Axmed ma ka dhab baa mise waa siyaasadii lagu bartay ee aheyd Qawda maqashii waxna ha u qaban leef leef hakaaga soo baxee. Bishii ina dhaaftey ee Oktober waxaa uu Garoowe ku dhex maray heshiish qudbo siro ah maamulka Puntland iyo Raisul-wasaare C/weli Sh. Axmed kaasoo lagu sheegey heshiis qaran balse ahaa heshiish jufo.
Taariikhda ayaa xusi doonta qof weliba shar iyo qeyr wuxuu geystaba inta uu hayo kursiga maqaamka sare ee dalka. Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, wuxuu hore u soo noqday ra’isul wasaare qaran, balse waxaa laga hayaa hadalo recording ah. Waa qaa’inul wadan una dheer qabyaalad iyo daciifnimo.
Dowlada Talyaaniga lacago ay ugu talo gashay dad beeraley masaakin ah, degan koofur goobaha ay abaartii ugu darneyd 2011 saameysay. Lacagtaasi waxey gaareysa cadad 15, milyan Euro ah, wuxuu u weeciyey in lagu dhiso Garoonka Boosaaso taasoo aan la soo marsiin, Gole Baarlamaan iyo mid wasiiro intuba afkiisa ayuuna ka qirtay. Wuxuu ka hadlayey munaasabad taageero loogu muujinayey imaaraadka Carabta. Xaqii baana ka hadal siiyey, lacagtaasi la isma weydiin balse waxaan ka codsanayaa dowladu in ay record- gareyso shaqsiyaadkii hore u lunsaday hanti qaran midkuu doonaba ha ahaadee si loo maxkamadeeyo mustaqbalka.
Qabyaaladu waa tan bur burisa qaranimada. Heshiis ku sheegii laba Cabdiweli ee Garoowe balse la siyaasadeyey waa tan manta dowladu madaxa iskula jirta. Raisul-wasaare C/weli Sh. Axmed, waa shaqsi ka arradan siyaasada hada jirta iyo wixii la soo marayba una baahan in tolkiisu u caqli celiyaan. Waa nin aanan fahmi Karin siyaasada Puntland ee soo jireenka ah. Waxaan leeyahay Raisul-wasaare C/weli Sh. Axmed, Xisbigii leegada laga soo bilaabo ilamaa waqtigaani, Maamulka Puntland dowlad ama maamul ay taageeran waxaa laga hayaa dowladii C/laahi Yuusuf Axmed, maxey dowladihii hore iyo tan manta jirtaahi u luga qabanayaan? Maxey u dileen Madaxweyne Sharmaake oo weliba ayaga ka soo jeeeday. Danta ay Eithiopianka isugu dhiibeen maxey tahay oo aan aheyn soomaaliya sidaan rabo hadan ka waayo burburkeedan ka shaqeynaya, hal tusaale Ayaan kaaga soo qaadayaa mudane Raisul-wasaare.
Dowladii Kacaanka aheyd ee adiguba lagugu xanto in aad qarash badan ku lunsatay mansab iyo heeykal dowladnimo, dad masaakiin ah oo xoolo dhoofsanayey oo aad madax u noqotay. Ma is weydiisay yaa bur buriyey dowladaasi halkeese ka burburtay? Mise waxaa kugu xiran USC ayaa burburkeedi laheyd. Mid waa run in USC ay dhamestir ku laheyd ridistii dowladii militeri laakin waa goorma? Ururkii SSDF wixii ka danbeyey inqilaabkii dhicisoobay ee 1978 maalinba xibin ayey siibayen dowladaa, ilaa laga soo gaaro 1990. Balse USC waxey lugaha isugu dhufatay 26 casho oo kaliya aan la dhihi Karin sanado iyo bilooyin bey la dagaalamayen. Waxaan rabaa in aan xusuusiyo Raisul-wasaare C/weli Sh. Axmed, Xisbigii leegada hada maaheyn waqtiguu shaqeynayey, reer Puntland soomaali oo dhan baa ka dheregsan hadafkoodu siyaasadeed wuxuu yahay, waa bulsho dad fiican ay ku jiraan laakin ay hormuud u noqdaan mar weliba dadka kuwa ugu qabyaalad badan ama ugu liita, soomaalina kala geeya, weliba beesha aad ka soo jeedo ee ina Ismaaciil Jabarti. Qabyaalada reer Puntland Rag baa ka tiriyey maanso yar oo cajiiba xiligaa waxey yiraahdeen.
Leegadu qaab daranaa oo qal qalooc badanaa
Oo qabiil la qarinaayey ku qaraabasho ogaaa
Ma Qardheey ku dhasheen oo
Qandalley ku koreen
Qufac aan ka baxeyn
Qof qof ha ugu dhacee.
Jawaari oo joojiyey mooshinka C/Weli kuna dhowaaqay go’aan 10 qodob ah
Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa goordhow soo saaray warbixin ku saabsan wixii maanta ka dhacaya xarunta golaha shacabka iyo dhibatada ka taagan mooshinka laga keenay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Weli Sheekh Axmed.
Warka qoraalka ayaa lagu sheegay in gudoomiye Jawaari uu hakad geliyey mooshinka in mar kale la horgeeyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kadib markii uu saddex goor fashilmay, sida ku cad qodobka 10-aad ee warqadda soo gaartay Jornalizem.
Sida qoraalka ku cad waxaa joojinta mooshinka loo sababeeyay inuu kala qeybiyay xildhibaanada barlamaanka Soomaaliya, taasi oo dhalisay in Jawaari uu ku dhawaaqo joojinta mooshinka inta laga xalinayo khilaafka ka dhex oogan xildhibaanada.
Si kastaba waxaa xusuusin mudan in Jawaari uu joojinta ku sheegay hakad oo kaliya, oo aanu gebi ahaanba diidin mooshinka
Qoraalka kasoo baxay Jawaari, oo ka kooban 10 qodob ayaa nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyey Alldhacdo ee hoos ka aqriso.
Xog: Xildhibaannada taageersan C/Weli oo lix qorshe u dejiyey kullanka BFS﻿
Xildhibaan ka tirsan garabka R/W C/weli Sheekh Axmed, ayaa kulan ay ku qaaten Magaalada Muqdisho iskula meel-dhigay ilaa Lix qodob oo ay ku burburinayaan Fadhiga Baarlamaanka ee la filaayo in maanta uu qabsoomo.
Xubno gob jog u ahaa kullanka, ayaa Jornalizem u sheegay ujeedkooda koowaad uu yahay inay is hortaagan kulanka, waxa uuna carabka ku dhuftay in go’aano adag ay qalinka ku duugen xildhibaanada kulmay.
Isaga oo sharaxaad yar naga siinaayay qaabka ay uga soo horjeesan doonaan Mooshinka, ayaa waxa uu sheegay inay adeegsan doonaan qodobada soo socda:-
1- In foodo aan kala joogsi laheyn laga dhex kiciyo Xarunta Baarlamaanka.
2- In mar kale dib loo qaado Heeso qiiro leh iyo cod dheer oo lagu sheego in Mooshinka uu yahay mid aan xalaal aheyn.
3- Inaan la sugin hadalka Gudoomiye Jawaari oo marka uu soo galo laga horgeeyo buuq iyo sawaxan.
4- Haddii aan dhag jalaq loo siin buuqa iyo sawaxanka, waxa ayn ku balameen inay farqaha qabsadaan Xildhibaanada kasoo horjeeda Xukuumada R/W C/Weli ee Mooshinka laga wado.
5- In gacan ka hadal loo bedelo kulanka haddii ay dhacdo in Ciidamada Ammaanka loo fasaxo dajinta xaalada xiligaasi ka dhex qasan Xarunta.
6- Inaan la kala jabin oo lagu adkeysto mowqifka lagu difaacaayo R/W C/weli.
Dhanka kale, waxa uu Cadeeyay inay ka go’an tahay inay difaacan qadiyada Ra’isulwasaare C/weli uu uga soo horjeedo Madaxweynaha dalka Xassan Sheekh Maxamuud.
Xog: Xildhibaano xabsi la dhigi doono iyo Xasan iyo Jawaari oo qorshe wata
Guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa mooshinka ka dhanka ah ra’iisul wasaare Cabdi Weli maanta u qeybin doono xildhibaanada.
Jawaari waxa uu sheegay inaan marnaba loo dulqaadan doonin xildhibaanno fowdo iyo buuq dhaliya, oo howlihii baarlamanka ay ka socon la’ yihiin, waxaana la filayaa in maanta uu qaado tallaabo adag.
Jornalizem ayaa heshay xog dheeri ah oo ku saabsan qorshaha lagu xakameeyo xildhibaanada taageersan ra’iisul wasaare Cabdi Weli, ee fowdada looga cabsi qabo inay fuliyaan maanta.
Ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay Jornalizem in ciidamo badan oo ka tirsan nabad sugidda iyo kuwa Amisom saaka la geyn doono xarunta baaarlamanka, sida qorshuhu yahay, ayada oo xabsiga lagu guri doono xildhibaanada fowdada wada.
Waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in guddoomiye Jawaari iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay la hadleen Taliyaha nabad sugidda Cabdiraxmaan Tuuryare, uuna ballan qaaday in xildhibaankii fowdo la yimaada uu tallaabo adag ka qaadi doono, oo aan loo dul qaadan doonin.
Si kastaba, xildhibaanada taageersan Cabdi Weli, oo aan heysan codad ku filan oo ay ku bad baadiyaan ra’iisul wasaaraha ayaa wararka ay sheegayaan inay ku dhaarteen inay fowdo dhigi doonaan maanta.
SIR LA HELAY:- Laba shaqsi oo ugu cad cad in ay bedalaan Cabdiweli Sheekh (MAGACYADA AKHRI)
Baaritaan buuxa ay sameysay Alldhacdo.com ayaa waxa ay ku soo ogaatay in ay jiraan xubno iminka u sharxan in ay badalaan R/wasaare C/wali marka xilka laga qaado ee uu waayo Kalsoonida Baarlamaanka.
Labadaan mas’uul ayaa waxa ay kala yihiin Wasiirka Maaliyada Xusen Cabdi Xalane oo ah shaqsiga ugu dhaw ee xilkaan qaban kara isla markaana saaxiibo dhaw ay yihiin M/weyne Xasan Sheekh isla markaana ay u badneyd in isaga uu noqon lahaa R/wasaare ka hor C/wali Sheekh balse markii danbe waa laga dulqaaday.
Xusen Cabdi Xalane ayaa hadda iibsanaya baabuurta aysan karin risaasta maadaama uu yahay ruuxa ugu cad ee xilkaan qaban karo isla markaana mar kasta ku jira xafiiska M/weyne Xasan Sheekh isaga oo taageero ka heysta Itoobiya.
Dhanka kale musharaxa labaad ee macquulka tahay in xilkaan loo magacaabo ayaa waxa uu yahau Saciid C/llahi Max’ed oo hadda ah Wasiirka qorsheenta isla markaana ka tirsan ururka Damu Jadiid uu M/weynaha ka tirsan yahay.
UGu danbeyntii ma jirto cid sedexaad oo hadda xilkaan ku heysta labadaan Wasiir oo hadda ku jira Wasiirada saxiixay in xilka uu iska casilo R/wasaaraha maadaama uu waayay Kalsoonidii uu kula shaqeyn lahaa M/weynaha.
XOG: Jawaari oo amar aan lagu farxin dul dhigay xildhibaanada raacsan R/W
War goor dhow naga soo gaaray dhanka Baarlamaanka Somalia, ayaa sheegaya in Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu talisyada laamaha ammaanka faray inay xaqiijiyaan Ammaanka Xarunta inta lagu guda jiro gudbinta Mooshinka.
Gudoomiyaha ayaa waxa uu Xildhibaanada ugu baaqay inay ilaalsadaan Xasaanadooda, isagoona ku wargaliyay in Ammaanka gudaha Xarunta ay ku wareejiyeen Ciidamada AMISOM, gaar ahaan kuwa Booliska iyo tiro yar oo taabacsan Boliska DF Somalia oo caawinaayo kuwa AMISOM, halka kuwa Nabadsugidana ay sugayaan Ammaanka banaanka sare.
Jawaari ayaa waxa uu amray in Xildhibaankii xarunta ka dhex kiciyo buuq ay Ciidamadu u fasaxan yihiin inay ka dhex saaran gudaha Xarunta, inkastoo warar hoose ay sheegayaan in Xildhibaanada qaar lagu kala sooci doono banaanka.
Dhanka kale, Arrintaani ayaa waxa ay ka turjumeysaa heerka uu gaarsiisan yahay Caqabadaha ka taagan gudbinta Mooshinada, waxaana mar waliba suuragal ah in halkaasi uu ka dhaco gacan ka hadal.
Xaalada ayaa ah mid aan horay loo arag, iyadoona ay labada Mas’uul ka biyo diidan yihiin inay muujiyaan isku tanaasul.
Khilaafka Xasan Sheekh iyo Cabdi Weli oo saameeyey safaaradaha SOMALIA
Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibada iyo Dhiiri gelinta Soomaaliya Mudane Burci Maxamed Xamse ayaa ka hadlay khilaafka madaxda dowladda federaalka u dhaxeeya ee saamaynta ku yeeshey xildhibaanada Baarlamaanka.
Burci waxa sheegay in khilaafku saameeyey safaaradaha dibadda ee Soomaaliya, waxaana uu u digay shaqaalaha safaaradaha.
Wasiiru Dowlahu waxa uu fariin u diray dhamaan shaqaalaha ka howl gala safaaradaha kala duwan ee dalka dibadiisa isagoo si khaas ula hadlay Safiirada, Agaasimayaaasha wasaaradda, waaxyada maamulaha hoose ee la xiriira shaqada oo uu ku booriyey in ay shaqada ay u hayaan shacabka ka soo ka dhexgalin khilaafka madaxda dowladda federaalka.
“Waxaad tihiin shaqaale joogta ah oo u xilsaaran hagidda howlaha qaranka ee dibadda , waxaa la idinka doonayaa inaad fududeysaan adeegyada iyo iskaashiga idinkala dhaxeeya Wasaaradaha kala duwan ee dowladda , Xafiisyada Ururada, hey’adaha iyo Safaaradaha shisheeye ee ka furan dalka Soomaaliya” ayuu ku yiri war uu soo saaray wasiiru dowlaha Arrimaha dibada Soomaaliya.
Khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha ayaa gaaray meel aad u sarayso, iyadoo soo shaac bixida khilaafkan laga joogo muddo ku dhow bil, illaa hadana aan wax xal ah laga gaarin, Wuxuuna saamayn ku yeeshay Golaha Baarlamaanka iyo golaha wasiirada.